Ubuntu 13.04 Raring Ringtail ကို Install လုပ်ပြီးလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ Linux မှ
Ubuntu 13.04 Raring Ringtail ကို install လုပ်ပြီးလျှင်ဘာလုပ်ရမည်
Ubuntu 13.04 Raring Ringtail ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့အလင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒီရေပန်းစားတဲ့ distro တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်သလိုဒီမှာအချို့ရှိသည် မင်းလုပ်သင့်တဲ့အရာ တစ် ဦး လုပ်ပြီးနောက် တပ်ဆင် ခြစ်ရာကနေ
11 ၁၁။ Compiz Settings Manager နှင့်အပိုပလပ်အင်အချို့ထည့်သွင်းပါ
13 ၁၃။ Dash မှ Amazon ရလဒ်များကိုဖယ်ရှားပါ
Ubuntu 13.04 ကိုဖြန့်ချိပြီးနောက် Canonical မှဖြန့်ဝေသော ISO ပုံသဏ္withာန်နှင့်ပါသောမတူကွဲပြားသော package အသစ်များပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။
sudo apt-get update ကို sudo apt-get upgrade ပြုလုပ်
Dash မှာငါရေးခဲ့တယ် ဘာသာစကား ပြီးတော့သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာစကားကိုထည့်နိုင်လိမ့်မည်။
Ubuntu သည် 3D driver ရရှိနိုင်မှုကိုအလိုအလျောက်သိရှိပြီးသတိပေးသင့်သည်။ အဲဒီလိုဆိုရင်၊ အပေါ်ကဘုတ်မှာဗွီဒီယိုကဒ်ပြားတခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ထိုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပြီးညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
Ubuntu ကသင်၏ကဒ်ကိုမတွေ့ပါက Hardware Configuration Tool ကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်သင်၏ 3D driver (nvidia or ati) ကိုအမြဲတပ်ဆင်နိုင်သည်။
အချို့သော ATI ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များသည် ATI ၏ "legacy" driver များကို အသုံးပြု၍ X server ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း မှလွဲ၍ Ubuntu နှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ လိုအပ်ပါက Ubuntu သည်အဘယ်ကြောင့်စနစ်တကျ boot မတက်သည်ကိုသင်လျင်မြန်စွာရှာဖွေလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အောက်ပါ Command များကိုအသုံးပြုပါ။
sudo apt-add-repository ppa: ubuntu-x-swat / x-updates အသစ်များ sudo apt-get update အသစ်
sudo add-apt-repository ppa: diesch / စမ်းသပ်ခြင်း sudo apt-get update sudo apt-get install unsettings
၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် "apt-get" command ကိုအမြဲတမ်းသုံးနိုင်သည်။
သင်လိုချင်တာကိုလုပ်ရန် application တစ်ခုမရရှိလျှင်သို့မဟုတ် Ubuntu မှပုံမှန်အားဖြင့် application များသင်မကြိုက်ပါက Ubuntu Software Center သို့သွားနိုင်သည်။
၎င်းကို Ubuntu မှ Ubuntu Classic သို့ပြောင်းပါ
ဤထူးခြားသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဤ option ကိုမရရှိပါကအောက်ပါ command ကိုအရင်စမ်းကြည့်ပါ။
sudo apt-get install gnome-session-fallback ကို install လုပ်ပါ
Unity အစား Gnome 3.6 ကို GNOME Shell နဲ့စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
တပ်ဆင်ခြင်း - ဆော့ဝဲစင်တာတွင်ရှာဖွေပါ: gnome shell ။ မဟုတ်ရင် Terminal ထဲမှာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
sudo apt-get install gnome-shell ကို install လုပ်ပါ
sudo add-apt-repository ppa: ricotz / စမ်းသပ်ခြင်း sudo add-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3 sudo apt-get update sudo apt-get install gnome-shell gnome-tweak-tool
သတိပြုရန်: ဤနည်းဖြင့် GNOME Shell ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် Ubuntu ယောက်ျားများစွန့်ခွာသွားသောအခြား GNOME 3.6 packages များကို install လုပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ Nautilus ၃.၆ ။ သေချာတာပေါ့၊ သင်လိုချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာပြproblemနာမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့မင်းဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသတိထားဖို့လိုတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် Gnome Shell ကိုတပ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်သည် Gnome Shell ၏ extension များကိုလည်းထည့်သွင်းရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ သူတို့ကို GNOME Shell 3.6 တွင်ထည့်သွင်းရန်
sudo apt-get install လုပ်ရန် gir1.2-gtop-2.0 wget -O gs-extensions-3.6.deb http://dl.dropbox.com/u/53319850/NoobsLab.com/apps/gs-extensions-3.6.deb sudo dpkg -i gs-extensions-3.6.deb sudo rm gs-extensions-3.6.deb
sudo add-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / cinnamon-stable sudo apt-get update sudo apt-get install kinnamon
sudo add-apt-repository "deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu $ (lsb_release -sc) အဓိက" sudo add-apt-repository "deb http://repo.mate-desktop.org / ubuntu $ (lsb_release -sc) ပင်မ "sudo apt-get update" sudo apt-get install mate-archive-keyring sudo apt-get install mate-core mate-desktop-environment ကိုသုံးပါ။
၁၁။ Compiz Settings Manager နှင့်အပိုပလပ်အင်အချို့ထည့်သွင်းပါ
sudo apt-get compizconfig-settings-manager compiz-fusion-plugins-extra ကို install လုပ်ပါ
sudo apt-get ကိုဖယ်ရှား appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
sudo apt-get installmen app-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
၁၃။ Dash မှ Amazon ရလဒ်များကိုဖယ်ရှားပါ
၎င်းကို System Settings> Privacy panel မှပိတ်နိုင်သည်။ ထိုနေရာတွင်ရှိပါက "Include online results" ကိုရွေးပါ။
နောက်ထပ်နည်းနည်းနောက်ကျသောရွေးစရာတစ်ခုမှာသက်ဆိုင်ရာ package ကို uninstall လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
sudo apt-get ကိုဖယ်ရှားခြင်း unity-lens-shopping
စတင်ရန် System Settings ဘုတ်> Online Accounts သို့သွားပါ။ ထိုတွင်ရှိ“ Add Account” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Ubuntu WebApps သည် Gmail, Grooveshark, Last.fm, Facebook, Google Docs နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်သော Unity desktop နှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစည်းနိုင်သည့် feature သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် HUD မှတစ်ဆင့်ရှာဖွေနိုင်မည်၊ အသိပေးချက်များကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ Desktop, quicklists များကိုထည့်ပြီး၎င်းသည် message များနှင့် notifications menu နှင့်ပင်ပေါင်းစည်းလိမ့်မည်။
စတင်ရန်သင့်အားထောက်ပံ့ထားသောဆိုဒ်များကိုသာကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့တွင်စာရင်းအပြည့်အစုံရှိသည် ဒီမှာ) အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ် "install" pop-up ကိုနှိပ်ပါ။
Ubuntu 13.04 desktop လမ်းညွှန်ကိုသွားပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Ubuntu 13.04 Raring Ringtail ကို install လုပ်ပြီးလျှင်ဘာလုပ်ရမည်
တကယ်တော့ဒီဗားရှင်းအသစ်ဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ငါ့စက်နဲ့အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်တာအမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် Facebook မှာအကောင့်တွေမထည့်ထားလို့အွန်လိုင်းအကောင့်တွေမှာအခက်အခဲရှိတယ်။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မက်စ် AV ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းလိုက်တဲ့ post တစ်ခု၊ ငါတွေ့ခဲ့သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။ အဲဒါကိုအစ်ကိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆက်ထိန်းထားပါ။ ကူညီမှုအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မက်စ် AV ကိုပြန်ကြားပါ
Jorge Antonio ဟုသူကပြောသည်
Jorge Antonio ကိုစာပြန်ပါ
NC Penumbra ဟုသူကပြောသည်
ဒီ Ubuntu ဗားရှင်းမှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ခေါ်ဆိုမှုကိုသုံးလို့ရမလား။
Nc Penumbra အားစာပြန်ပါ
Karel quiroz ဟုသူကပြောသည်
မီဒီယာအမျိုးမျိုးကဖော်ပြသည်မှာ ၁၃.၀၄ သည် ၁၂.၀၄ နှင့် ၁၂.၁၀ ထက်ပိုမိုပေါ့ပါးလာသည်ဟုအီလာအားသတိမပြုပါနှင့်။ Ubuntu ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်၊ ဤလိပ်စာသို့သွားပါ။ http://www.ubuntuleon.com/2013/01/acelera-unity-tu-cacharro-la-altura-de.html
Karel Quiroz အားပြန်ပြောပါ
ယခု Ubuntu မြန်ဆန်စေရန်လမ်းညွှန်မှာဤဗားရှင်းအသစ် (၁၃.၀၄) သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ http://www.ubuntuleon.com/2013/01/acelera-unity-tu-cacharro-la-altura-de.html
Carloncho Linuxero ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
Shell ကိုမထိခိုက်စေဘဲ Dolphin ကိုသုံးနိူင်ပါသလား။ ရှိလျှင်ငါ Grub ဆက်တင်များကိုပြောင်းသည်။
Carloncho Linuxero အားပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကအမြဲတမ်းအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကောင်းကောင်းမမှတ်မိနိုင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့သော command များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်အားငါတောင်းဆိုသည်။
Mario Alberto Hedz Hedz ဟုသူကပြောသည်
Mario Alberto Hedz Hedz အားပြန်ပြောပါ
Esteban Javier ဟုသူကပြောသည်
Esteban Javier အားပြန်ကြားပါ
Javier ဖာနန်ဒက်ဇ ဟုသူကပြောသည်
Facebook ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုသည် Skype ဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။
Javier Fernandez အားပြန်ကြားပါ
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် Linux ကိုတော့အထောက်အပံ့မပြုသေးဘူး။ Win အပေါ်မှာပါတော့ Mac နဲ့ပါ။
မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်၌ကျော်ကြားသော Google Hangouts သို့မဟုတ် Skype ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောရွေးချယ်စရာများ
ကောင်းတယ် အလွန်ကောင်းသည့်ပို့စ်တစ်ခု၊ compiz plugins များတပ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်သည်မှားသည်ဟုငါထင်သော်လည်း။
sudo apt-get compizconfig-settings-manager compiz-plugins compiz-plugins-extra
ငါအမျိုးမျိုးသောအရာတို့ကို install လုပ်ဖို့ script ကိုအသုံးပြု။ နှင့် cube သို့မဟုတ်အခြား plugins ကိုသက်ဝင်ဖို့လမ်းမရှိသော။ ဒီ Ubuntu ဗားရှင်းမှာသူတို့ပိတ်ထားတယ်ထင်တယ်၊ မနေ့ကအထိငါ script ထဲမှာ compiz-plugins-extra အစား compiz-fusion-plugins-extra (ဒီတော့ fusion) ကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။
ကောင်းပါတယ် !!! စိတ် ၀ င်စားသူတွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့တွေ့နိုင်တယ်။ အသေးစိတ်အတွက်မိတ်ဆွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
kde-kde နှင့်အတူ kubuntu သည်ပိုလေးသည်၊ စည်းလုံးမှုကိုဖယ်ရှား။ ပိုမိုလွယ်ကူသော Launcher ကိုအသုံးပြုပါ။ Cairo-dock ကဲ့သို့သော launcher နှင့်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။ purge unity သို့မဟုတ်သင်၏ကိစ္စတွင် avant ကိုသုံးပါကဤဗားရှင်းတွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သေးသည်။ တရားဝင် repos ၌တည်၏။
ဆိုလိုသည်မှာ kubuntu သည် kde နှင့် xubuntu xfce စသည်တို့ကိုသယ်ဆောင်လာသည်မှာထင်ရှားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ hahaha တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမြင်တဲ့အခါငါပေးပို့လိုက်ပြီးသတင်းကိုတည်းဖြတ်လို့မရဘူး။
ဂျရိုနီမို နာဗာရို ဟုသူကပြောသည်
Jeronimo Navarro အားပြန်ပြောပါ
Jose Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
Urra ငါပထမ ဦး ဆုံးကောင်းကောင်းမှတ်ချက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါပြောချင်တာကဒါဟာ post ကောင်းကောင်းတစ်ခုလို့ပြောချင်တယ်။ ငါတို့ blog ကိုတင်လိုက်ပြီ။ http://notiubuntu.blogspot.com/2013/05/que-hacer-despues-de-instalar-ubuntu.html
jose rodriguez သို့ပြန်သွားရန်
neyson Daniel ဟုသူကပြောသည်
buahhhh အလွန်ကောင်းတဲ့အစ်ကို၊ ငါမသိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
neyson daniel အားပြန်ပြောပါ
ခင်ဗျားလုပ်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး .. ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် .. Ubuntu ကပိုနှေးလာတယ်။ Kubuntu ကြိုးစားကြည့်ပါ
အိန်ဂျယ် Adrian Vera ဟုသူကပြောသည်
ငါကဒီအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ၁၂.၁၀ လမ်းညွှန်ကိုသုံးပြီးအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်။
Angel Adrián Vera အားပြန်ပြောပါ
ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုတည်း၊ compiz တပ်ဆင်ရန်အမိန့်များနှင့်မန်နေဂျာ၊ သင်အနေဖြင့်“ compiz-fusion-plugins-extra” သို့“ compiz-plugins-extra” သို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
ငါဒီကို install လုပ်နေတယ်:
package ကိုစာရင်းဖတ်နေ ... ပြီးပြီ
အခြေအနေအချက်အလက်ကိုဖတ်နေသည် ... ပြီးပြီ
Lha အထုပ်ကိုမရနိုင်ပါ၊ သို့သော်အချို့သောအထုပ်အညွှန်းများ
ရန် ဤသည်အထုပ်ပျောက်ဆုံးနေ, ပေါရာဏသို့မဟုတ်သာဆိုလိုသည်လိမ့်မည်
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် installation ကိုခွင့်မပြုပါ
"Dash မှာငါ Language ရေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီကနေသင်ကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားကိုထည့်နိုင်လိမ့်မယ်။ "
ငါစပိန်ဘာသာပြောင်းလဲမှုလုပ်ရှာတွေ့ဘယ်မှာ dash? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
JM အလီ ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်၊ နောက်ပိုင်းတွင် kubuntu သို့သို့မဟုတ် xubuntu 13.04 အတွက်နှုတ်ခွန်းဆက်နိုင်သည်။
JM Ali အားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ Ubuntu ဗားရှင်း ၁၀ ရှိတယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီကနေမွမ်းမံဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကဒီဗားရှင်းကိုထပ်မံမပံ့ပိုးထားဘူး၊ ငါ့ကိုမွမ်းမံချက်တခုခုလုပ်ခွင့်မပြုဘူး။ ဒီ Ubuntu ကို version 10 (သို့) ဒီ ၁၃ သို့ Ubuntu ကိုယ်တိုင်ကနေဘယ်လို update မလဲ။
အဲလက်စ် Provencio ဟုသူကပြောသည်
Álex Provencio အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းတယ် ငါ update ကိုမျှော်လင့်, သင်ခန်းစာစုံလင်ခြင်းနှင့်တကယ်အသုံးဝင်သော။
မင်္ဂလာပါ၊ ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့သည်၊ အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဤဆောင်းပါးကိုအခြေခံသည့် script တစ်ခုရေးခဲ့ပြီးသောအားဖြင့်ဤအရာအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်စေသည်။ ဒီမှာငါသူတို့ကိုထားခဲ့ပါ https://github.com/idcmardelplata/ubuntu13.04-postinst
Happy Hacking acking
ဇာတ်ညွှန်းကိုစပ်စု ... သို့သော် ကျေးဇူးပြု၍ 'v' with နှင့်ရေးပါ
ဟိုဆေး Miguel Ochoa ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့ script အရမ်းကောင်းတယ် .. ကံကောင်းပါစေသူငယ်ချင်း
Jose Miguel Ochoa အားပြန်ပြောပါ
သင်၏ version သည် LTS ဖြစ်ပါကသင်သည်အခြား LTS သို့ပြောင်းနိုင်သည် 12.04 ။ အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်မလိုပါကသန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။ 😐
ဒီ version နှင့် Ubuntu ၏ ၁၂.၀၄ နှင့်ပတ်သက်သောအရောင်များနှင့်အရသာအားလုံး၏မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရပြီ။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏လက်တော့ပ်တွင်အဆင်ပြေပါသည်။ ဗားရှင်း ၁၃.၀၄ ကိုထည့်သွင်းပါ။ ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေခြင်း၊ ၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နောက်ထပ်အကြံပေးချက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိအလွန်ကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏လက်တော့ပ်သည်ပျမ်းမျှအရင်းအမြစ်များရှိသည်ဟုသင်ပြောလိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကိုယခုစီးပွားဖြစ်ကိုင်တွယ်သည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Ubuntu အတွက်လေ့လာသူပါ။ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိနေပြီးအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းပါ။ အရာရာတိုင်းသည် ati driver များနှင့်မဆိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်သောအခါစည်းလုံးမှုဘားပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ၊ ထိပ်ဆုံးနှင့်ဘယ်ဘက်မှအောက်ခြေသာပါရှိလိမ့်မည်။ ငါဖွင့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စူးစမ်းလေ့လာတဲ့သူကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက် gnome effect မရှိဘဲရိုက်ထည့်ပြီး unity bar ပျောက်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိချင်ပါတယ်။
Ubuntu 13.04 ကို install လုပ်ပြီး၎င်းသည် installation ၏ ၃၀% နီးပါးတွင်အမှားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ Ubuntu သည်အတွင်းပိုင်းအမှားတစ်ခုနှင့်စနစ်သည်သေသွားသည်။ ကောင်းစွာ install လုပ်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်စနစ်သည်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်၊ အမှန်တရားမှာအလွန်ဆိုးရွားသည် အတွေ့အကြုံရှိသူ ၁၀ pc ၃ ကငါ့ကိုပြသနာတစ်ခုပေးသည်။ pc တစ်ခုစီ၏ ၂ သည်နှေးကွေးသည်။ ၀ င်းဒိုးမှလာသူများအတွက်စည်းလုံးမှုကအလွန်ရှုပ်ထွေးသွားသောကြောင့်အမှန်တရားမှာစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရင့်ကျက်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒီဟာကတိရိစ္ဆာန်အုပ်စုတစ်စုကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံသေနည်းတစ်ခုရှိတာနဲ့တူတယ်၊ အကယ်လို့ဒီတစ်နေ့ဒီလိုပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပြတင်းပေါက်တွေကအမှားတွေကိုပြင်ဖို့သင်ယူကြလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောဆောင်းပါး Ubuntu သည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေပါသည်။ Ubuntu 13.10 ကိုသွင်းပြီးနောက်တွင်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုသည်။
သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုပင်အခြားဆောင်းပါး၌ထားခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ တူညီသောအရာများကိုမရေးပါနှင့်သို့မဟုတ်၎င်းသည်စပမ်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။
Marcelo Quilmes ဟုသူကပြောသည်
ဤအရာအလုံးစုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာသစ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ OS ကိုအသုံးပြုသင့်သည်အတိုင်းစတင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစပိန်ဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။ salu2
marcelo quilmes အားပြန်ပြောပါ
မတူဘဲ! ဖက်သည်! ရှင်ပေါလု။
Linux distros အားလုံးသည်ကွန်ပြူတာအသိုင်းအဝိုင်း၏ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သည်။ OS နှင့်အထောက်အပံ့နှစ်ခုစလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။
My Ubuntu 13.04 သည်အလွန်များပြားစွာပြောသောအလွန်အကန့်အသတ်ရှိသော netbook ပေါ်တွင် ၁၀ ခုမှထွက်လာပြီး၎င်း OS ရှိပြproblemsနာများသည်ကျွန်ုပ်တို့မသိဘဲဖြစ်နေသည်။
မင်းကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တာပဲ။ ငါကွန်ပြူတာကိုအရမ်းနှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ Windows တစ်ခုလုံးကိုငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအသုံးချခဲ့တယ်။ အခုငါလွှတ်ချင်တာကခက်ခဲပေမယ့်ဒီလိုအကူအညီနဲ့သူကတော်တော်လေးသက်သာသွားတယ်။
အလွန်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက် !!!! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
အလွန်ပြီးပြည့်စုံသော post ကိုနှင့်ဤဘလော့ဂ်တွင်ဖတ်ရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့၏အမြင့်မှာငါ့လေးစားမှု။
Ubuntu 13.10 အတွက်ထပ်တူအချက်အလက်တွေထပ်တူပေးရင်တောင်အဲဒါကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
အမှန်တရားကတော့တချို့ကဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်ညည်းနေတာလဲ၊ ညည်းညူတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ အမှန်တရားကတော့ငါ Ubuntu ကိုသုံးပြီးဗားရှင်း ၆ ကနေစပြောရရင်ငါ install လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြproblemsနာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့အဲဒါဟာ ၁၂.၀၄ ထက်ပိုကောင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းမြန်နေပုံရပြီးနှေးနှေးတွယ်တာခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဒီနေရာမှာအခိုင်အမာပါ ၀ င်သူများလို့ထင်ပေမယ့်အရာအားလုံးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တပ်ဆင်သူများပါ။ လှပပြီးလှတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့က Windows တံခါးဖွင့်ကောင်တွေပဲလား၊ သူတို့ဟာ Bill Gate ရဲ့အဝတ်စကနေချွတ်လို့မရတဲ့အခမဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဂုဏ်သိက္ခာကျစေတယ်။ come Greetings ubunteros
Ubuntu ကို install လုပ်ရတာခက်ခဲတဲ့ကောင်လေးအတွက်။
ကြည့်ရတာ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးကတော့သင့်မှာ Intel နဲ့မတူတဲ့ပရိုဆက်ဆာပါတဲ့စက်ရှိတယ် (AMD သာလျှင်သူတို့သုံးကြတာပါ) ။
မင်္ဂလာပါ၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကအရမ်းကောင်းတယ် ubuntu 12 to 13 မှ update အတွက်ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာရှိတယ်လို့ပြောတယ်၊ အင်တာနက်ရေဒီယိုကိုနားမထောင်နိုင်ဘူး။ install လုပ်ချင်တဲ့ package ကငါ့ကိုပြောတယ် - အီး: libfreehep-graphicsio-emf-java package ကိုပြန်လည် install လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒီတစ်ခုအတွက်ဖိုင်။
Mediubuntu repositories ကအလုပ်မဖြစ်တော့တော့ဒါကိုသင်အစားထိုးသင့်တယ် http://www.ubuntu-guia.com/2013/09/medibuntu-desaparece.html သူတို့သည်အမြဲတမ်းအလွန်အထောက်အကူပြုသောသင်၏လမ်းပြများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အိုကေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ပို့စ်၏အချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြီးသားဖြစ်သည်။ 🙂
Francisco Landos ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါပြtheနာရှိနေတာကဖန်သားပြင်အေးခဲနေပြီးကီးဘုတ်ကမောက်စ်ဖြင့်သာတက်တက်ကြွကြွပါ။ သင်၏အကြံပြုချက်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခါအေးခဲမသွားဘူး။ လျှောက်လွှာ ၂ ခုထက်ပိုပြီးဖွင့်လို့မရဘူး၊ (၄) ခုဖွင့်ပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Francisco Landos သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်တော့် console မှတ်တမ်းများကိုအခက်တွေ့နေပါတယ် ထွက်လာတဲ့ command တွေကိုပြန်သုံးဖို့နောက်ပြန်လှည့်ချင်ရင်ငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ၎င်းသည်လက်ရှိ session ၏ command များကိုသာအနည်းဆုံးသာမန်အသုံးပြုသူနှင့်သာသိမ်းဆည်းသည်။ root လုပ်သူမှငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်။ history command ကိုသုံးသောအခါကျွန်ုပ်နှင့်ထိုအတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်း session ၏အချက်အလက်များကိုပြသည်။ Ubuntu 12.10 နဲ့အစောပိုင်း version တွေမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံးကောင်းတယ်၊ ၁၀ မှတ် ... အရာရာကိုကြိုက်တယ် ... ubuntu ကအကောင်းဆုံးပါပဲ ...
fidel fajardo ဟုသူကပြောသည်
ငါပြတင်းပေါက်များအတွက်အထောက်အပံ့အဖြစ်ကူညီငါ့ကိုအထောက်အကူပြုအဖြစ်ငါရေဒီယို, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် pc ပြုပြင်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် client ကိုအမြဲတမ်းအကြောင်းကိုတစ်ခုခုမေးသောကြောင့်ငါကတည်းကအလုပ်ပလက်ဖောင်းပြောင်းလဲပစ်ရန်စမ်းသပ်မှုလုပ်နေပါတယ်နှင့် client ကိုအမြဲ pc အကြောင်းကိုတစ်ခုခုမေး အဖြေမပေးမီ Ubuntu မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုအကြံပေးချင်ပါသလဲ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤပလက်ဖောင်းနှင့်အတူတူပင်အလုပ်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါကမည်သည့်အကြံပြုချက်မျိုးကိုမဆိုအမြဲကြိုဆိုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
fajel fajardo အားပြန်ကြားလျှောက်ထားပါ
ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက် - ubuntu ကို pendrive သို့ကူးယူပါ၊ သင်၏ bios များကိုထိုနေရာမှ boot လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ပါ။ Ubuntu မှ pendrive မှ "live" ကိုစမ်းသပ်နိုင်လိမ့်မည် (ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ hard drive မှမည်သည့်အရာကိုမျှမဖျက်ပဲ) ။ ဒီနည်းနဲ့အရာအားလုံးဟာသင့်တော်သလိုအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုစမ်းသပ်နိုင်ပြီး Ubuntu ကပါလာတဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုတောင်တောင်မှ install လုပ်နိုင်မှာပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ubuntu အတွက် wifi drives များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်သည်
မင်္ဂလာပါ Linux Ubuntu သို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွှေ့နိုင်သည့်အလွန်အသုံးဝင်သောပို့စ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်
သို့သော်ကျွန်ုပ်၌ပြaနာရှိနေပြီးအဖြေကိုရှာ။ မရပါ။ DVD menus များကို mplayer player ဖြင့်မကိုင်တွယ်နိုင်ပါ။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသိလိုပါသည်။
ubuntu linux ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တွင် dvd player နှင့်ပြaနာရှိနေသည်။ (mplayer)
Prosian နှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ် Debian Squeeze တွင်
Cinnamon နှင့် Linux Mint တို့၏အနာဂတ်